मैले शेरबहादुरजीको जयजयकार गर्नु उचित हुदैन - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
मैले शेरबहादुरजीको जयजयकार गर्नु उचित हुदैन
० मधेसी मोर्चाले यही वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचनमा सहभागी नुहने भन्दै निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यसलाइए कसरी लिनु भएको छ ?
–नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चाको समर्थनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा मधेसका समस्यालाई संविधान संशोधनमार्फत समाधान गर्ने र देशलाई संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने भन्ने नै सहमति भएको हो । त्यहि आधारमै संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले अघि बढाएको हो ।
० तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि अघि बढाउने निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भनेर त सरकारले प्रष्ट रुपमै भनेको छ नि, फेरि किन आन्दोलन त ?
–निर्वाचन गर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिले सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुलाइ नकारात्मक कुरा भनिएको छैन । तर, योसँगै देशका सबै राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । नेपालका सबै नेपाली जनताले निर्भीकताका साथ निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउने पनि सरकारकै दायित्व हो ।
० यसको मतलव मधेसी मोर्चालाई खुशी नबनाइ निर्वाचनमा जानु हुँदैन भन्ने तपाईको भनाइ हो ?
–हो, मधेसमा समस्या छैन कसैले पनि भनेका छैनन् । मधेसमा समस्या छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो । त्यसैले मधेसमा समस्या छ भने छलफल गरेर, मधेसका समस्या समाधान गरेर मधेसका सबै जनताले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा सरकार र अन्य दलको पनि किन कन्जुस्याँइ त ? मधेसमा पनि सहज वातावरणमा निर्वाचन होस् भन्ने हो भने मधेसको समस्या समाधन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यो भनेको संविधान संशोधन नै हो । मैले यी कुरा विभिन्न फोरममा पनि भन्दै आएको छु ।
० यसको मतलव मधेसमा अहिले पनि अशान्ति नै छ । यस्तो बेलामा निर्वाचन सम्भव छैन, होइन ?
–निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने हो भने मात्र फलदाई हुन्छ । त्यो तिर पनि सरकारको ध्यान जान सकोस् भन्ने मेरो भनाइ छ ।
० तर, मधेसी मोर्चाले गरेका एकपछि अर्को माग पूरा हुनै नसक्ने छन् भनेर त काँग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि भन्दै आएको छ नि ?
–कुन माग मधेसी मोर्चाका पूरा हुन सक्दैनन् ? त्यो कुरा त प्रष्ट रुपमै भन्नु पर्यो नि ! तपाईँहरुका यी–यी माग अहिले पूरा गर्न सकिन्न भनेर प्रष्ट त आउनु पर्यो नि त्यत्तिकै भनेर हुन्छ ?
० अहिले मधेसी मोर्चाले उठाएको सीमांकन भाषा, नागरिकतालगायतका विषयमा त प्रष्ट रुपमै सम्भव छैन भनेर सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि भनेकै छन् नि होइन ?
–जहाँसम्म सीमांकनको कुरा छ । त्यो त पहिला संविधान जारी गर्नु अघि नै मधेसमा दुई प्रदेश हुने छ भनेर भनिएको कुरा हो । त्यतिबेला नै काँग्रेस, एमाले र राप्रपाले त्यो खाकालाई सहमति जनाएका हुन् । बरु माओवादी र मधेसी मोर्चाले भने त्यसैबेला पनि अस्वीकार गरेको हो ।
० सहमतिका लागि त दुबैतर्फबाट लचिलो बन्नुपर्ला नि ?
–मैले यही भन्दै आएको छु । अहिले मधेसी मोर्चाले जे माग राखेका छन् । उनीहरुले पनि केही चलिचो हुनुपर्छ र सरकारले पनि केही लचिलो बन्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र सहमति निस्कन सक्छ । यो समस्या देशको हो भनेर एमाले पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । सबैले हाम्रो जिम्मेवारी देशलाई निकास दिने नै हो भनेर अघि बढ्ने हो भने समस्या समाधान गर्न कुनै समस्या छैन ।
० यही अवस्थामा वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
–मधेसी मोर्चालाई पनि वार्तामा ल्याएर निर्वाचनमा सहभागी गराउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । सरकारको पनि हो । तिमीहरु आए पनि आऊ नआए पनि नआऊ भनेर जाने हो भने त निर्वाचन पनि फलदायी होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० तपाइको पार्टी नेपाली काँग्रेसको भनाइ चाहिँ के–हो ?
–हामीले ०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । हामी सबै यही दायित्व पूरा गर्न लागेका छौँ । हामीले संविधान जारी गरेर निकै ठूलो उपलब्धी हाासिल गरेका छौँ । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि हामीसँग छ । त्यसैले सबै पक्षलाई समेटेर हामी संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्छ । नेपाली काँग्रेसको धारणा पनि यही हो । हामीले सबै नेपाली जनताको स्वीकार्य संविधान बनाउन पनि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र सर्वस्वीकार्य संविधान बन्न सक्छ । त्यसका लागि सबै भन्दा बढी पहल सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन ।
० मधेसी मोर्चा नै सहमतिबाट भागेको हो भन्ने आरोप काँग्रेस, माओवादी र एमालेले पटक–पटक किन लगाएको त ?
–मधेसी मोर्चासँग यी–यी कुरामा हामीले वार्ता गर्न खोजेका हौँ । मोर्चा यी–यी कुरामा मानिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट धारणा त सरकारले पनि बाहिर ल्याउनु पर्यो नि ।
० संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाकै सहमतिमा ल्याएको हो । तर, उनीहरुले नै मानेनन् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भनाई आरोप मात्रै हुन ?
–यो सन्दर्भमा प्राविधिक त्रुटि भएको हो कि भन्ने मैले ठानेको छु । सरकारले मधेसी मोर्चाकै सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भनिरहेको छ । यता मोर्चाका नेताहरुले हामीसँग जे सम्झौता भएको थियो त्यसैलाई हटाएर संशोधन प्रस्ताव ल्याए पछि हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ भनिरहनु भएको छ । यसरी हेर्दा दुबै पक्षबाट केही कमजोरी भएको छ । यी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
० मधेसी मोर्चाका मागप्रति तपाईँ सकारात्क देखिनु हुन्छ । तर, मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता तपाईँहरुकै घर तोडफोड गर्ने, तपाईँहरुलाई नै आक्रमण गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । यस्ता कारणले पनि मधेसमा भएका आन्दोलन मोर्चाको भन्दा पनि अरु कसैको निर्देशनमा चलेको छ भन्यो भने के हुन्छ ?
–नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलो पटक जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानका पक्षमा म दृढतापूर्वक उभिँदा मधेसी मोर्चाका साथीहरुले त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिए र मेरो घर तोडफोड गरे । विगतमा माओवादी र पञ्चायतले पनि मलाई विभिन्न खाले दुःख दिएकै हुन् । यी सबैलाई मैले दृढतापूर्वक सामना गर्दै आएको छु ।
अहिले पनि भन्छु । संविधानमा केहि त्रुटि थिए । केही त्रुटि भएकै संविधान हामीले संशोधनमार्फत सच्याउने भनेर नै जारी गरेको हो । त्यसैले अब सच्याएर जाने कुरामा हामी सबैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । ३ सय ९ वटा दफा भएको संविधानमा मधेसी मोर्चाले पनि जम्मा चार वटा दफाको पनि केही उपदफामा मात्र असहमति व्यक्त गरेको छ । ती बाहेक त स्वीकार गरकै हो नि । त्यसैले उनीहरुका यी केही असहमतिलाई पनि सम्वोधन गरेर सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गर्नु नै अहिलेको सबै भन्दा उत्तम विकल्प हो । अहिले काँग्रेस कहाँ हार्यो, मोर्चा कहाँ जित्यो, एमालेले कता हार्यो भन्ने भन्दा पनि सबै नेपाली जनताले जित्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यो देश सबै पार्टीको हो भन्ने बुझेर अघि बढ्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ ।
० अहिले मधेसी मोर्चाको मागमा भन्दा पनि नियतमा शंका छ भनिन्छ नि ?
–मधेसी मोर्चाकै साथीहरुको सहयोगमा बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डजी, झलनाथजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला चाहिँ शंका भएन छ ? मैले केपी ओलीजीको आलोचना गर्ने अनि शेरबहादुर देउवाजीको जयजयकार गर्ने कुरा पनि त्यति उचित हुँदैन । हामी सबैले सबैको सम्मान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
यत्रो प्रकरणमा प्रहरी प्रमुख चुप लागेर बस्न मिल्छ ?
बजेटमा राजनीतिक सोच नै छैन
अबको बजेट भोगटेजस्तो हुनु हुदैन
भारतले विगतको कार्यशैली सुधार्नेमा हामी विश्वस्त छौं
मन्त्री बन्नुअघि नै जिम्मेवारी पाउँदै छु भन्ने संकेत पाएको थिएँ
ढुक्क भए हुन्छ, यो एकता टुक्रिँदैन
प्रदेशको राजधानी काठमाडौंबाहिरै हुनुपर्छ
सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा तल्लिन छौं
कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता निर्विरोध हुँदैन